Haddii aad tahay muwaadin u dhashay waddan ka mid ah Woqooyiga Yurub islamarkaasna aad Finland u soo guurayso, uma baahnid in aad codsato sharciga deganaanshaha dalka iyo in aad sababayso joogitaankaada Finland. Waxaad si la mid ah muwaadiniinta Finland xaq u leedahay in aad Finland shaqo ka qabato, ganacsade ka noqoto ama wax ka barato.
Ka sokow Finland, waddamada Woqooyiga Yurub waa Iswiidhan, Norway, Danmark iyo Iceland. Maadaama Ahvenanmaa ay ka tirsantahay Finland Jasiiradaha Fär iyo Greeland ay ka tirsan yihiin Danmark, dadka reer Ahvenanmaa, jasiiradaha Fär iyo Greeland waxay ka tirsan yihiin Woqooyiga Yurub.
Haddii aad ku talajirto in aad Finland deganaato ugu badnaan lix bilood, uma baahnid in aad saraakiisha Finland u dirto wax wargelin ah.
Haddii aad ku talajirto in aad Finland deganaato wax ka badan lix bilood, iska diiwaangeli goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Horay u sii buuxi foomka diiwaangelinta ajnabiga. Si shakhsi ah u gey goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka horayna u sii qaado aqoonsigaada rasmiga ah ama baasaboorkaada shaqaynaya.
Sida ugu dhakhasaha badan u samee diiwaangelinta, si kastaba ha ahaatee samee ugu dambayn bil gudoheed oo ka billaabanysa maalinta aad Finland u soo guurtay.
Soo guurista muwaadinka Woqooyiga YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaNorden.org
Macluumaad loogu talagalay muwaadiniinta Waqooyiga Yurub Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Finland summadda aqoonsiga qofka waxaad ugu baahan tahay wax ka qabashada arrimo badan: tusaale ahaan shaqo-bixiyahaada ama arrimahaada baniga. Marka aad haysato aqoonisga Finnishka, waxaad haddii aad doonayso Finland ka samaysan kartaa shirkad.
Aqoonsiga qofka waxaad ka heleysaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, marka aad iska diiwaangelinayso nidamaka macluumaadka dadka. Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku waxay nidaamka macluumaadka dadka ku keydinaysaa macluumaadkaada aaasaasiga ah, sida magacaada, wakhtiga aad dhalatay, jinsiyaddaada, xiriirkaada qoyska iyo cinwaankaada.
Waxaa sidoo kale kuu wanaagsan in aad Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ka hubsato, in aad xaq u leedahay guri degmo oo Finland ah. Haddii aad guri degmo ku leedahay Finland, sida caadiga ah waxaad xaq u leedahay in aad isticmaasho adeegyada degmada.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Isu diiwaangelin degene.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland Guri degmo ee gudaha Finland .
Xubnaha qoyska ee muwaadinka Woqooyiga Yurub
Haddii xubinta qoyskaada ka tirsan ee Finland kuula soo guuraysa aanay ahayn muwaadin u dhashay waddan Woqooyiga Yurub ah, waxaa laga yaabaa in uu u baahdo sharciga deganaanshaha ama caddaynta diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland Muwaadiniinta Midowga Yurub ama Aan aheyn muwaadin EU .